ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအကြား longitudinal ဆက်နွယ်မှုကိုခန့်မှန်းခြင်း (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
ထင်မြင်ချက်များ။ ။ စစ်တမ်းသည်အင်တာနက် မှလွဲ၍ မီဒီယာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေသောကြောင့်ဤတွင်ကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ဤတွင်ရောက်ရှိနေကြောင်းမသေချာပါ။ ဤတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုအကြားဆက်စပ်မှုကိုပြသသည့်မည်သည့်လေ့လာမှုနှင့်မဆိုပြtheနာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? များပြားလှစွာသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခဲ့ကြသောလူငယ်ယောက်ျားလေးများသည် ED ဖြစ်နိုင်သောမိန်းကလေးများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများကျဆင်းလာခြင်းနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုညည်းညူကြသည်။
J ကိုလိင် Res ။ 2009 နိုဝင်ဘာ-ဒီဇင်ဘာ; 46 (6): 586-96 ။ Doi: 10.1080 / 00224490902898736 ။
Hennessy M က, Bleakley တစ်ဦးက, Fishbein M က, ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဦးက.
ပြည်သူ့ပေါ်လစီစင်တာ, Pennsylvania ပြည်နယ်, Philadelphia တွင်, 19104, အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အခြေခံမှာ 506-14 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏တစ်ဦးကသုံးလှိုင်း longitudinal စစ်တမ်းနမူနာ (N ကို = 16) တိုးတက်မှုနှုန်းခါးဆစ်ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်မှုနှုန်းဘယ်နေရာတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတှကျအ linear ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါထိတွေ့တောင်စောင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ်ပုံစံတည်းအပြုသဘောမဟုတျပါ: ဟစ်စပန်းနစ်နှင့်အာဖရိက-အမေရိကန်ဖြေဆိုသူအသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ကျဆင်းမှုသူမ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးပြသe.
လိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့ပြောင်းလဲမှုများအလွန်အမင်းအဖြူအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နေစဉ်, လူမည်းတွေအကြားကဤ variable တွေကိုပြောင်းလဲမှုများအကြားအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအသင်းအဖွဲ့လည်းမရှိ။
အဘယ်အရာကိုကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေ့မြင်နားကြားများနှင့်မီဒီယာကိုဖတ်ရှုသူတို့၏လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အမူအကျင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ယူဆနေသည်။ Buhi & Goodson (၂၀၀၇) မီဒီယာပုံသဏ္ဌာန်မြီးကောင်ပေါက် '' ယုံကြည်ချက်, သဘောထား, စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများယူဆများအတွက်ခိုင်မာသောသီအိုရီအခြေခံရှိကွောငျးငြင်းခုန်။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်ဖြစ်နိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာမီဒီယာသက်ရောက်မှု၏အခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (သုတေသနမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းအထူးသဖြင့်အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်အမျိုးအစားများအကြားအသင်းအဖွဲ့မှာရှာဖွေနေလေ့လာမှုများ (စမ်းသပ်ကြိုးကိုင်သို့မဟုတ်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေဖြစ်စေ) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုစံတန်ဖိုးယုံကြည်ချက်အဖြစ်ရလဒ်များအားဖြင့် corroborated ခံရဖို့လေ့Chia & Gunther, 2006လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏), အတိုင်းအတာများနှင့်အချိန်ကိုက် (Aubrey, Harrison, Kramer & Yellin, 2003), နှင့်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်အကွာအဝေး (Brown, L'Engle, Pardun, Guo, Kenneavy, & Jackson, 2006; L'Engle, Brown & Kenneavy, 2006; Collins, 2005; Somers & Tynan, 2006).
ဒီ "မီဒီယာသက်ရောက်မှု" စာပေမျိုးစုံမီဒီယာနှင့်မျိုးစုံရလဒ်များ (အထိချဲ့ပေမယ့်Escobar-Chaves, Tortolero, Markham, အနိမျ့, Eitel, & Thickstun, 2005; ရပ်ကွက်, 2003; ရပ်ကွက် & Friedman, 2006), မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေးအများဆုံးသုတေသနရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်အာရုံစိုက်။ မြီးကောင်ပေါက် (ရုပ်သံကိုကြည့်နေတဲ့နေ့က61 /2နာရီပေါင်းပျမ်းမျှသုံးဖြုန်းမသာRoberts သည် Foehr & Rideout, 2005), ဒေတာ (ရုပ်သံအပေါ်လိင်၏ပမာဏ (အရှိဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံသုတေသနပြုမီဒီယာ) ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုKunkel, Cope, & Colvin 1996; Kunkel, Cope-Farrar, Biely, & Donnerstein, 2001; Kunkel, Biely, Eyal, Cope-Ferrar, Donnerstein, & Fandrich 2003; Kunkel, Eyal, & Finnerty, 2005ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်းသစ်တခုတခုအပေါ်မှာအခြားရွေးချယ်စရာအမြင်များအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတွေ့မြင် Hetsroni, 2007). ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်စုစုပေါင်းငွေပမာဏဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့မထင်ထားဘူးနေစဉ်ဘရောင်း & မျက်နှာသစ်, 1991; Collins, 2005; ရပ်ကွက်, 2003), အချို့သောသုတေသနပြုရုပ်မြင်သံကြား (ဥပမာလိင် oriented အမျိုးအစားများအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့အကြံပြု; မြင့်သောလိင်အကြောင်းအရာနှင့်အစီအစဉ်များ) လိင်, သက်တူရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သဘောထားအမြင်, လိင်အလိုလိုသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်အကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Ashby, Arcari & Edmonson, 2006; ဘရောင်း et al ။ , 2006; Collins, Elliot & Miu, 2007; Eggermont, 2005; L'Engle, Jackson & Brown, 2006; Pardun, L'Engle & ဘရောင်း, 2005; Tolman, Kim, Schooler & Sorsoli, 2007; ရပ်ကွက်, 2003; ရပ်ကွက် & Friedman, 2006).
ဥပမာ, ဘရောင်းနှင့်မျက်နှာသစ် (1991) ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ထိတွေ့နာရီစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကမဟုတ်သလိုရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့နာရီစုစုပေါင်းအရေအတွက်ကမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါရှိသောကြောင့်အချိန်ကြည့်ရှုရုပ်မြင်သံကြား၏အချိုးအစား သာ. , ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ကွောငျးဖြစ်ခဲ့သည်။ Collins, Elliot, Berry၊ Kanouse, Kunkel, Hunter & Miu (၂၀၀၄) 12-17 နှစ်ပေါင်းကြားရှိတစ်ဦးနှစ်ဦးကိုလှိုင်း longitudinal စစ်တမ်းအသုံးပြုသောနှင့် (23 ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုတစ်ဦးအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်အခြေခံပြီး) ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်စောင့်ကြည့်လိင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်အလျင်အမြန်, နေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ ပါဒန်း၊ လန်းနှင့်ဘရောင်း (၂၀၀၅) , ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့လိင်ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်မရအလင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ, တစ်ဦးအရူးအမူးရှိခြင်း, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ချိန်းတွေ့, အလင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောနမ်း) သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုနှင့်အတူခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ (ဆိုလိုသည်မှာ, ရင်သားကင်ဆာထိထိမိမိ လိင်အင်္ဂါ fondling, ပါးစပ်လိင်, လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ။
အဆိုပါ Pardun, L'Engle နဲ့ဘရောင်း (2005) လေ့လာမှုလိင်ဆက်ဆံဖို့ 'ဆိုတဲ့ Cross-Section ရုပ်မြင်သံကြားထက်အခြားမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအကြားအသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ရုပ်ရှင်များ, မဂ္ဂဇင်းများ, သတင်းစာများ, ဂီတ, အင်တာနက်) နှင့်မြီးကောင်ပေါက်ဆနျးစစျဖို့ပထမဦးဆုံး (ဆိုလိုသည်မှာ, အသက်အရွယ် 12-14) ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်လိင် (အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မှထိတွေ့မှုများအကြားအင်အားအကောင်းဆုံးအသင်းအဖွဲ့များရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်အတူတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တို့ကကောက်ယူတူညီတဲ့နမူနာ၏ longitudinal လေ့လာမှု ဘရောင်း et al ။ (2006) ထို့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြား၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ်ကျော်လွန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာ 12 အတွက်စုဆောင်းအခြေခံ data တွေကိုသုံးပြီးဂီတ, ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မဂ္ဂဇင်းကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှုများ၏စုပေါင်းသက်ရောက်မှု "အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်" (အသက်အရွယ်မရွေး 14-2002) ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထဲမှာစုဆောင်းအတိုင်းလိုက်နာ-up, ဒေတာ 2004 ။ သူတို့ကပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်အတူအဖြူရောင်လူငယ်နှစ်နှစ်အကြာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်စေ့စပ်ပြီနိမ့်စားသုံးမှုနှင့်အတူ White ကလူငယ်ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဤ White ကဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ထိတွေ့မှုအခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, အသက်အပိုင်းအခြားနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာ covariates အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်သည့်အခါဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကှဲလှဲသာ 3% အဘို့မှတ်။ အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုမရှိသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မီဒီယာများ၏အတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးအချို့သက်သေအထောက်အထားရှိ၏ သို့သော်ဆက်ဆံရေးတုံ့ပြန်၏မျိုးနွယ်အပေါ်ခြွင်းချက်ပုံရသည်။ ထို့အပြင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲများမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုမသိရသည်မည်မျှ။
ရုပ်မြင်သံကြား, ဂီတ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း: ဤစာတမ်းတွင်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လေးခုကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့တစ်တုံ့ပြန်-based အစီအမံအပေါ်ဒေတာကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြား longitudinal ဆက်ဆံရေးဟာခန့်မှန်းကြသည်။ ကျနော်တို့ 14 နှစ်အတွင်း 16-3 နှစ်အရွယ်မြီးကောင်ပေါက်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ထို့ကြောင့်ထိတွေ့-အပြုအမူဆက်ဆံရေးမျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တိုးတက်မှုနှုန်းကွေးမော်ဒယ်လ်ကိုသုံးပါနိုင်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာသုတေသန၏ဤဧရိယာ၌ထူးခြားသောဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ရန်အချိန်ကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုအကြားကွန်ပျူတာအသင်းအဖွဲ့များ (: ကဤနေရာတွင်သက်ဆိုင်ရာနှစ်ခုသုတေသနကိစ္စရပ်များကိုအမှာစကားတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမဟာဗျူဟာပါဝငျသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့တိုးတက်မှုနှုန်းကွေးမော်ဒယ်လ်ကိုသုံးပါCheong, MacKinnon & Khoo, 2003), ဤ longitudinal လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကျားမနှင့်လူမျိုးစုကွဲပြားမှု (ရှိပါက) (ဖော်ထုတ်Barnes, Reifman, Farrell & Dintcheff, 2000; Fergus, Zimmerman, & Caldwell, 2007) ။ အောက်ပါသုတေသနမေးခွန်းများကိုစဉ်းစားနေကြသည်:
အသက်အရွယ် 14 မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုပမာဏကိုနောက်ဆက်တွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏လမ်းကြောင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသလား ဤမေးခွန်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောနှင့်အတူ (အသက် 14 မှာဥပမာ) ထိတွေ့မှု၏ကနဦးတန်ဖိုးကိုအကြားဆက်စပ်မှုခန့်မှန်းအားဖြင့်တစ်ဦးတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးအခြေအနေတွင်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အသက်အရွယ် 14 မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပမာဏကိုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှု၏လမ်းကြောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးသလား ဤမေးခွန်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောနှင့်အတူ (အသက် 14 မှာဥပမာ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကနဦးတန်ဖိုးကိုအကြားဆက်စပ်မှုခန့်မှန်းအားဖြင့်တစ်ဦးတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးအခြေအနေတွင်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအပြောင်းအလဲဘယ်လိုနေလဲ ဤမေးခွန်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ဆင်ခြေလျှောနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ဆင်ခြေလျှော correlating ကကြီးထွားကွေးအခြေအနေတွင်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ကနဦးတန်ဖိုးများ, parameter သည်ဆက်စပ်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှု၏ဘယ်နေရာတွေမှာလဲကျားမနှင့် / သို့မဟုတ်လူမျိုးစုများအကြားကွဲပြားသလား? ဒါကဖြစ်ပါသည်သို့သော်လည်း parameter တန်ဖိုးများနှင့်ကျားမနှင့် / သို့မဟုတ်လူမျိုးစုများအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ရှိသလော ဤမေးခွန်းကိုစစ်တမ်းဖြေဆိုသူလူဦးရေဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကို အသုံးပြု. တိုးတက်မှုနှုန်းခါးဆစ်၏ parameters တွေကိုခန့်မှန်းအားဖြင့်တစ်ဦးတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးအခြေအနေတွင်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Annenberg လိင်နှင့်မီဒီယာလေ့လာမှု (ASAMS) မြီးကောင်ပေါက်အတွက်မီဒီယာအတွက်လိင်နှင့် Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးဟာငါးနှစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတပုံစံသွင်းသွင်းခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ASAMS များတွင်အသုံးပြုသောသရုပ်ခွဲ variable တွေကိုကပဲ့ထိန်းနေကြသည် အမူအကျင့်ခန့်မှန်း၏ Integrated မော်ဒယ် (Ajzen & Albarracín, 2007; Fishbein, 2000), သောနှီးနှောလုပ်ဆောင်ချက်၏သီအိုရီများပေါင်းစပ်, စီစဉ်ထားအပြုအမူ, ကနျြးမာရေးယုံကြည်ချက်မော်ဒယ်နှင့်လူမှုရေးသိမြင်မှုသီအိုရီဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း 2005, 2006 နှင့် 2007 ၏နွေဦးနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်း fielded တစ် Web-based စစ်တမ်းကနေတဆင့်အရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဖြေဆိုသူပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ရေဒီယိုကြော်ငြာတိုက်ရိုက်မေးလ်များနှင့်စစ်တမ်းဖြည့်စွက်ရန်နှုတ်မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအကောင်းဆုံးအားဖြင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူ (49%) အတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည် Metro ကြော်ငြာများ (Metro နှုတ် (14%) သို့မဟုတ်အမည်မသိနည်းလမ်း (14%) ကနောက်တော်သို့လိုက်လမ်းပေါ်ထောင့် bins မှတဆင့်နှင့် Philadelphia တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကပေါ်ဖြန့်ဝေနေတဲ့အခမဲ့သတင်းစာ) ဖြစ်ပါသည်။ အဖြူနှင့်အဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူနည်းလမ်းများတစ်ဦးထက်ပိုသောတန်းတူညီမျှရောနှောပြသခဲ့သည်။ အဖြူရောင်ဖြေဆိုသူများအတွက်သုံးတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည် Metro ကြော်ငြာများ (27%), ဖြေဆိုသူမှတဆင့်အစောပိုင်းကစုဆောင်း (23%), နဲ့တိုက်ရိုက်မေးလ် (14%) ကနေတဆင့်။ ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူများအတွက်သုံးတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည် Metro ကြော်ငြာများ (28%), ဖြေဆိုသူမှတဆင့်အစောပိုင်းကစုဆောင်း (23%), နှင့်နှုတ် (13%) ။
ဖြေဆိုသူအရည်အချင်းပြည့်မီစံကနဦးစစ်တမ်း (14, 15, ဒါမှမဟုတ် 16) နှင့်ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစု (အဖြူရောင်, အာဖရိကန်အမေရိကန်, သို့မဟုတ်ဟစ်စပန်းနစ်) ၏ထိုအချိန်ကအသက်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါနမူနာမဟာဗျူဟာခွဲတမ်း-မောင်းနှင်အားလုံးလူမျိုး * အသက်အရွယ် * ကျားဆဲလ်တွေအတွက်အကြမ်းဖျင်းညီမျှနမူနာအရွယ်အစားများအတွက်အလိုဆန္ဒ (က3*3*2ဒီဇိုင်း) နှင့်အတူရှိ၏။ သူတို့ရဲ့ဆဲလ်ကြိမ်နှုန်းနိမ့်နိုင်အောင်အလေ့အကျင့်၌, Philadelphia တွင်မြို့ပြဧရိယာထဲမှာဆယ်ကျော်သက်ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူ, နေရာချထားခြင်းနှင့်စုဆောင်းဖို့အလွန်အမင်းခက်ခဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအဆိုပါနည်းပညာ၏စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့်စစ်တမ်းတူရိယာတစ်ခု Pre-စမ်းသပ်အောက်ပါဧပြီလ 2005 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မပြည့်စုံမှုနှုန်း (ဥပမာအရေအတွက်ကအောင်မြင်စွာဝန်ခံသည့်အရေအတွက်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲကိုပထမဦးဆုံးစစ်တမ်းဖြည့်မဟုတ်) အဖြူရောင်ဖြေဆိုသူ (17%) များအတွက် (အသီးသီး 19% နှင့် 6%) Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူများအတွက်အလားတူနှင့်အောက်ပိုင်းရှိကြ၏။ ကျား, မများကမပြည့်စုံနှုန်းထားများမရှိခြားနားချက် (အထီး = 14%, အမျိုးသမီး = 13%) ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအင်တာနက် access ကိုနှင့်အတူမည်သည့်ကွန်ပျူတာကနေလက်လှမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတက္ကသိုလ်ကစစ်တမ်းသို့မဟုတ် Off-site ကိုတည်နေရာ (ဥပမာအိမ်, ကျောင်း, သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းစာကြည့်တိုက်) ယူများ၏ option ကိုပေးထားခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာစေရန်စစ်တမ်းဝင်ရောက်ဖို့စကားဝှက်တစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး password ကိုတာဝန်ကျတယ်။ ဖြေဆိုသူတစ်ဦးချင်းစီလှိုင်းမှာစစ်တမ်း၏ပြီးစီးအပေါ်သို့ $ 25 ဒေါ်လာလျော်ကြေးငွေများနှင့်ပျမ်းမျှအားဖြင့်စစ်တမ်းဖြည့်စွက်ဖို့တစျနာရီကိုယူခဲ့ကြသည်။ စစ်တမ်းအပေါငျးတို့သ3လှိုင်းတံပိုးပြီးစီးခဲ့သူများသည်ဖြေဆိုသူ $ 25 တစ်ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်အစွမ်း / မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံများကိုတင်ပြပြီးနောက် 547 14 မှအသက်အရွယ်မရွေး 16 adolescents (1 အတွက်) Wave ကို 2005 မှာစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ အဲဒီမှာဒေတာစုဆောင်းမှု၏သုံးလှိုင်းတံပိုးကိုကျော် retention ကိုနှုန်းထားများမြင့်မားတဲ့ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်ပျောက်ဆုံးတန်ဖိုးများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်က (ကနဦးနမူနာ၏ 87% ကိုအောင်မြင်စွာအားလုံးလှိုင်းတံပိုးအတွက် recontacted နှင့်ကနဦးနမူနာ၏ 94%2လှိုင်းကအနည်းဆုံး3ပါဝင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်) ဖြစ်ကြပြီး ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဒေတာကို set ကိုဒေတာစုဆောင်းမှု၏ 506 လှိုင်းကအနည်းဆုံး2များအတွက်ဒေတာအစုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်နေသောဖြေဆိုသူ3ဖို့ကန့်သတ်သည်။ အဆိုပါဖြေဆိုသူအသက် (62, 42 နှင့် 42) က 13% အမျိုးသမီး, 3% အာဖရိကန်အမေရိကန်, 1% White က, 14% ဟစ်စပန်းနစ်နှင့် 15% "အခြား။ " White ကဖြေဆိုသူများအတွက်တစ်နှစ် 16 အတွက်နမူနာအရွယ်အစားများမှာ 67 ခဲ့ကြသည် , 73 နှင့် 73 အသီးသီးက Black ဖြေဆိုသူများအတွက်အသီးသီး 74, 76 နှင့် 73 ခဲ့ကြသည်။
မှီခို Variable: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းရမှတ်
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအောက်ပါအပေါ်တစ်သက်တာအဘို့, လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကထက်ပိုမိုနှင့်အတိတ် 12 လအတွင်းဒေတာစုဆောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ: အမျိုးသမီးအဖော် (ကို item ၏ရင်သားကိုထိ: နက်ရှိုင်းသော (သင်အစဉ်အဆက်နက်ရှိုင်းသောနမ်းပါဝင်ခဲ့ဖူး (အချို့လူတွေကဒီ "ပြင်သစ်အနမ်း" မခေါ်)? ကို item): နမ်းသငျသညျအစဉျအမွဲအမျိုးသမီးမိတ်ဖက်ခဲ့ကြလျှင်, သင်သူမ၏ရင်သားကိုထိခဲ့ဘူး ?), သူတို့ရဲ့ရင်သားရှိခြင်းတုံ့ပြန် (ကို item ထိမိ: သငျသညျအစဉျအမွဲတနာတစ်ဦးတို့ကထိမိသည်သင်၏ရင်သားခဲ့ဖူး), တစ်ဖက် (ကို item အားဖြင့်တုံ့ပြန်၏လိင်အင်္ဂါထိထိမိမိ: တစ်ဖက်အစဉ်အဆက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိမိနေခဲ့ဖူးပါသလား), ပါးစပ်လိင် (ကို item: သင်အစဉ်အဆက်တစ်ဖက်မယ့်ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်သင်၏နှုတ်ထားဖူး (အချို့လူတွေကဒီ "ပါးစပ်လိင်" Cal) ပေးခြင်းတုံ့ပြန်?), ပါးစပ်လိင် (ကို item ကိုလက်ခံရရှိတုံ့ပြန်: အစဉ်အဆက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ပါးစပ်တစ်ဖက်ထားပြီ သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများ (အချို့လူတွေက "ပါးစပ်လိင်" ဒီကိုခေါ်)), အဖြေကိုလက်ခံရရှိစအိုလိင်ဆက်ဆံ (ကို item: သငျသညျအစဉျအမွဲအထီးမိတ်ဖက်ခဲ့လျှင်, အစဉ်အဆက်သင်၏အစအို၌သူ၏လိင်တံထား (အချို့လူတွေကဒီ "စအိုလိင်ဆက်ဆံ" မခေါ် )), အဖြေ (ယောက်ျား၏ဟုမေးသာ, ကို item စအိုလိင်ဆက်ဆံပေးခြင်း:? သငျသညျအစဉျအမွဲသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ရဲ့စအို၌သင်တို့၏လိင်တံထားဖူး (အချို့လူတွေကဒီ "စအိုလိင်ဆက်ဆံ" ဟုခေါ်သော)) နှင့်အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်း (ကို item ရှိခြင်း: သင်ဖူး အစဉ်အဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံ (လိင်အင်္ဂါအတွင်းဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးလိင်တံ) ရှိခဲ့?) ။
အဆိုပါအသက်အပိုင်းအခြားကန့်သတ်သောကွောငျ့, ကျနော်တို့အာရုံစိုက် တစ်သက်တာ ပစ္စည်းများအတွက်အပြုအမူတွေအများအပြားရှားပါးသို့မဟုတ်တိုတောင်းပြန်လည်သိမ်းဆည်းကာလကို အသုံးပြု. ကိုသုညလို့ပဲ။ နို့ကိုထိမိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းစအိုလိင်ဆက်ဆံ variable တွေကိုသာအမျိုးသမီးနှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်, နှင့်ထိထိမိမိရင်ပတ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ variable တွေကိုသာယောက်ျားနှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်ပေးခြင်းဒါကျွန်တော်တို့သည်လိင်ကွဲအပြုအမူတွေဖို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကန့်သတ်။ ငါတို့သည်လည်း၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုအထီးများအတွက်အညွှန်းကိန်းများ hierarchical သဘောသဘာဝလျော့ကျစေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စအိုလိင်ဆက်ဆံရရှိထားသူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ6ယောက်ျားထံမှ drop ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ကွဲအပြုအမူအညွှန်းကိန်းသူတို့အဘို့အဖြစ်ကောင်းမသင့်လျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဤရွေ့ကားဖြေဆိုသူအမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လိင်မဆိုတစ်သက်တာဖြစ်ပျက်မှုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းမရှိပေ။
ကျနော်တို့ dichotomous လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းများများ၏အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ Mokken အရွယ်တိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Mokken အရွယ်တိုင်းကနဦးပျက်ကွက်ပြီးနောက်ပစ္စည်းများအားလုံးလည်းပျက်ကွက်နေကြပါတယ်နှင့်ကနဦးပျက်ကွက်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ပစ္စည်းလွန်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့အခက်အခဲသာသနာကို, (အပေါ်အခြေခံသည်Ringdal, Ringdal, Kaasa, Bjordal, Wisløff, Sundstrøm & Hjermstad, 1999) ။ အချက်တွေကိုဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သုံးပြီးစကေးလျှင်, ပစ္စည်းအခက်အခဲအမိန့်ထုတ်စဉ်းစားနေကြသည်, ထိုသုတေသနပညာရှင်အတိအကျသိတယ်အညွှန်းရမှတ်အပေါ်အဘယ်အရာကို (ဥပမာ) တစ်ဦး "2" ကိုဆိုလိုသည်။ ဒီဥပမာထဲမှာ,a"ကို 2" နဲ့တစ်တုံ့ပြန်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းများဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအ5လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကအခက်အခဲသာသနာကို၏စကားပြန်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်: အ summative အညွှန်းကိန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုပစ္စည်းများလွန်ခဲ့သည့်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးသောဖော်ပြသည်။ ဒီလမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုချုံ့ချဲ့တစ်ထင်ဟပ်ကာအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူသုတေသီများပေးပါသည် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဆင့်ဆင့်။ "
item အစုံ Loevinger ရဲ့သုံးပြီးအခက်အခဲ-အမိန့် unidimensionality များအတွက်အကဲဖြတ်နေကြ H ကိန်း (Ringdal et al ။ 1999); တစ်ဦး .5 ၏တန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ခိုင်ခံ့သောစကေးညွှန်ပြ (Mokken, 1971, p ။ 185) ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဘို့, အချက်တွေကိုကောင်းကောင်းခဲ့သည်ဆို၏: H အထီးအဘို့တစ်နှစ် 0.75 အတွက်တစ်နှစ် 1 အတွက် 0.70, တစ်နှစ်2အတွက် 0.77 နှင့်3ရှိ၏ အမျိုးသမီးများအတွက် 1 မှနှစ်ပေါင်း H ကို3အသီးသီး 0.83, 0.84 နှင့် 0.83 ဖြစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုလှိုင်းအားဖြင့်ပျမ်းမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းရမှတ် (2.71 ခဲ့ကြသည်SD = 2.23), 3.62 (SD = 2.26), နှင့် 4.46 (SD အသီးသီးအနှစ် 2.17, 1 နှင့်2များအတွက် = 3) ။ လိင်ဖြတ်ပြီးအပြုအမူတွေ၏သာသနာကိုခဲ့: နက်ရှိုင်းသောနမ်း, ထိရင်သား / ရင်သားကိုထိမိ, လိင်အင်္ဂါထိထိမိမိ, ပါးစပ်လိင်လက်ခံရရှိ, အင်္ဂါဇာတ်လိင်, ပါးစပ်လိင်ပေးခြင်းနှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံပေးခြင်း / လက်ခံခြင်း။ သို့သော်တစ်နှစ်2အတွက်အထီးအဘို့, ပါးစပ်လိင် (45%) ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါလိင် (44%) သတင်းပို့၏အမိန့်ကိုတစ်နှစ်တာ 1 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (1% ဖြင့်ဖြစ်စေ) ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်3ခုနှစ်တွင်အထီးအဘို့အမိန့်တစ်နှစ် 1 မှတူညီသည်။ အမျိုးသမီးအဘို့, အပြုအမူများ၏အမိန့်သုံးခုစလုံးဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှစ်ပေါင်းဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲ-မိန့်သည်ဤဒေတာမှလျှောက်ထားအဖြစ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် Hennessy၊ Bleakley, Fishbein & Jordan (၂၀၀၈).
မှီခို Variable: မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမှ Exposure
မီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏ထိတွေ့ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်းအတာ variable တွေကို၏2အမျိုးအစားများပေါ်အခြေခံပြီးတွက်ချက်ခဲ့သည်: အဖြေဆိုသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် '' ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရွေးမီဒီယာ4မီဒီယာအတွက်ခေါင်းစဉ် (ရုပ်သံ, ဂီတ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဂိမ်းတွေကက) နှင့်ဖြေဆိုသူထိတွေ့အစီရင်ခံ '' မီဒီယာခေါင်းစဉ်၏။ အဆိုပါစာရင်းကိုအဆိုပါအခြေခံစစ်တမ်း၏အချိန်မှာဆယ်ကျော်သက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အများပြည်သူများအတွက်ရေပန်းစားခေါင်းစဉ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှဆောက်လုပ်ထားခဲ့သည်နှင့်အနှစ်2နှင့်3များအတွက် updated ခဲ့ကြသည်။ လူကြိုက်များသောခေါင်းစဉ်အပါအဝင် (က်ဘ်ဆိုက်အဆင့်များကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်: www.top5s.com/tvweek; www.boxofficemojo.com; www.imdb.com/boxoffice/rentals; www.billboard.com; www.gamerankings.com) နှင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်စစ်တမ်း၏စတင်မှနှစ်တွင်ကောက်ယူထားတဲ့ပရိသတ်ကိုသုတေသနကုမ္ပဏီ (နည်း, Tru Data) အဖြစ်လေယာဉ်မှူးစစ်တမ်းများကနေ။ ကျနော်တို့သူတို့က, ဆယ်ကျော်သက်ကြည့်ရှုအားပေးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဖမ်းယူကစား, ဒါမှမဟုတ်စာမဖတ်နိုင်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းအဆိုပါခေါင်းစဉ်, မီဒီယာအသုံးပြုမှုကို၏အတိမ်အနက်ကိုနှင့်အနံတစ်အသိပေးဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏တစ်နှစ် 1 မှာစစ်တမ်း 30 ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များစာရင်းများ, 30 ဂီတအနုပညာရှင်များ, 20 မဂ္ဂဇင်းခေါင်းစဉ်နှင့် 15 ဂိမ်းတွေကကပါဝင်သည်။ တစ်နှစ်အတွက်လေ့လာမှု2စာရင်းကို 75 ရုပ်မြင်သံကြားခေါင်းစဉ်, 50 ဂီတအနုပညာရှင်များ, 30 မဂ္ဂဇင်းများ, 40 ရုပ်ရှင်များ, နှင့် 40 ဂိမ်းတွေကကပါဝင်သည်, နှင့်လေ့လာမှု၏တစ်နှစ်3အတွက်စာရင်း 74 ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, 39 ဂီတအနုပညာရှင်များ, 32 မဂ္ဂဇင်းများ, 43 ရုပ်ရှင်ထည့်သွင်း နှင့် 45 ဂိမ်းတွေကက။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်, သို့သော်, ရုပ်ရှင်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အားလုံးကိုမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာထဲမှာမပါဝင်ပါ။
သာ Self-အစီရင်ခံစာအတိုင်းအတာစစ်တမ်းအပေါငျးတို့သညျသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသောကြောင့်, အစားအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုထက် self-အစီရင်ခံစာများ, အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ (ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောကဲ့သို့) သို့သော်ဖြေဆိုသူအပေါ်အခြေခံပြီးထိတွေ့မှုတိုင်းတာမှုများအကြားဆက်စပ်မှုလိင်အကြောင်းအရာ ratings ပိုင်ဆိုင်နှင့်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်အကြောင်းအရာ ratings အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့အား (အနှစ် 1 နှင့်2အဘို့, တစ်နှစ်3ခေါင်းစဉ်မရှိအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှိ၏) အပြုသဘော (ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်r တစ်နှစ် 75 အတွက် = .1 နှင့် r = တစ်နှစ် 77 အတွက် .2) ။ အဆိုပါနှစ်တွင် 1 ဆက်စပ်မှု: အပြင်, Self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းအပျေါမှာအခြေခံပြီးထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာအကြားဆက်စပ်မှုလိင်အကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းများ၏ content သရုပ်ခွဲ ratings အပေါ်သို့အခြေခံပြီးထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာအကြားဆက်စပ်မှုအလွန်ဆင်တူခဲ့ကြသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းများနှင့်တုံ့ပြန်-based ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာအကြား (.20 ခဲ့သည်p <.01) လိင်အပြုအမူအညွှန်းကိန်းများနှင့်အကြောင်းအရာ - ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ -based ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာအကြားတစ်နှစ် 1 ဆက်စပ်မှု .23 (စဉ်)p <.01) ။
တစ်ဦး 4-အမှတ်စကေးအပေါ်ထိတွေ့မှု၏ထုံးစံအတိုင်းအရှည်ကိုအသုံးပြုခြင်း (ခဲ, တခါတရံတွင်မကြာခဏဘယ်တော့မှ) ဖြေဆိုသူသူတို့တစ်ဦးချင်းစီပြသစောင့်ကြည့်ချင်းစီအနုပညာရှင်တွေကိုနားထောင်, တစ်ဦးချင်းစီမဂ္ဂဇင်းဖတ်ခြင်းနှင့်အသီးအသီးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပုံကိုမကြာခဏနောက်ဆုံး 12 လအတွင်းညွှန်ပြ။ ထို့နောက်ဖြေဆိုသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအောက်ပါအချက်များကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတွေကိုတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအကဲဖြတ်ရန်ဟုမေးခဲ့သည်: "ဒီစစ်တမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအကြောင်းပြောနေတာသို့မဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်: hooking-Up / ထွက်အောင်; sexy အဝတ်အစားတွေ; ဗလာ; လိင် (ပါးစပ်, စအို, ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါဇာတ်); ဘေးကင်းလုံခြုံလိင် (ကွန်ဒုံး, မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု, etc); လိင်ရာဇဝတ်မှုများ (မုဒိမ်းမှု); လိင်တူဆက်ဆံခြင်း (လိင်တူချစ်သူသို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ); သို့မဟုတ်တခြားဘာမှမလိင်ဆက်စပ်။ "ဒီချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကြိုတင်ဖြေဆိုသူမီဒီယာခေါင်းစဉ်၏လိင်အကြောင်းအရာဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခဲ့ကြရာအဘို့မေးခွန်းများကို၏အစုံမှချက်ချင်းစစ်တမ်းများတွင်တစ်ဦးချင်းစီမီဒီယာအပိုင်းများတွင်ထင်ရှား။ , "" မရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ "အနည်းငယ်: မေးခွန်းမှအဖြေမှာ" သင်ဘယ်လိုအောက်ပါများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအဆင့်သတ်မှတ်မည် ... "မြီးကောင်ပေါက်အောက်ပါတုံ့ပြန်မှုနဲ့ 4-အမှတ်စကေးပေါ်တွင်အားလုံးမီဒီယာခေါင်းစဉ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ rated ဖြေဆိုသူလိင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခဲ့ကြစဉ်ကတည်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ "," အခြို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, "နှင့်" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေအများကြီး။ "နောက်တုံ့ပြန်မှု option ကို" ငါဒီပြပွဲမကြည့်ကြဘူး / မသိရပါဘူး "ဟုထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကြောင်းအထူးသဖြင့်မီဒီယာခေါင်းစဉ်ထိတွေ့ခဲ့ဖူးကြောင်းအစောပိုင်းကညွှန်ပြလျှင်ပင်အသီးအသီးခေါင်းစဉ်၏အကြောင်းအရာ။ သို့သော်သူတို့ထိတွေ့ခဲ့ကြသောမီဒီယာခေါင်းစဉ်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာထဲမှာထည့်သွင်းထားပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာ, ထိုထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ထုတ်ကုန်တွက်ချက်ဖို့နဲ့တစ်ဦးချင်းစီခေါင်းစဉ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ rating လိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့ရုပ်မြင်သံကြားမှတိကျသောအစီအမံများ, ဂီတ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဂိမ်းတွေကကအတွက်ရရှိလာတဲ့, မီဒီယာ၏တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားအတွင်းချုပ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။ စုစုပေါင်းမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှုအတိုင်းအရှည်4မီဒီယာတိကျတဲ့အတိုင်းအတာကဉျြးခြုပျအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာအဘို့, စတုရန်းအမြစ်အသွင်ပြောင်းပိုကောင်းပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးဆုံးခနျ့မှနျးဖို့စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာအပေါ်ချမှတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်လျှင်ဤ variable ကို Z ကိုရမှတ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ မဟုတ်ရင်သက်သက်ကြောင့်ပိုပြီးမီဒီယာခေါင်းစဉ်နှစ်ပေါင်း2နှင့်3အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ကိုမှနောက်ပိုင်းတွင်နှစ်များတွင်ပိုမိုကြီးမားတန်ဖိုးများရှိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆုံးစွန်သောညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုအားလုံးသုံးလှိုင်းတံပိုးအဘို့, ပျမ်းမျှအားထိတွေ့ခြင်းရမှတ်0တစ်ဦးစံသွေဖည်နှင့်အတူ 1 ခဲ့ကြသည် (ဒီအသွင်ပြောင်းကြောင့်ထိတွေ့ရမှတ်ဆိုလိုပါဘူးသတိပြုပါ အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စု အားလုံးတူညီနည်းလမ်းများရှိသည်, ကြည့်ရှု ပုံ 1 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ။ တစ်နှစ် 1 နှင့်တစ်နှစ်2အတွက်စုစုပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှုများအကြား Pearson ဆက်စပ်မှုခဲ့သည် r = 0.61 ( p <.05) နှင့်တစ်နှစ်2နှင့်တစ်နှစ်3ဖြစ်ခဲ့သည် r = .68 ( p <.05) ။ မီဒီယာအတိုင်းအတာဖြင့်လိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်နောက်ထပ်တရားဝင်အချက်အလက်များကိုအခြားနေရာများတွင်ရရှိနိုင်သည် (Bleakley, Fishbein, Hennessy, ဂျော်ဒန်၊ Chernin & Stevens, 2008).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူညွှန်းကိန်းများနှင့် Exposure ရမှတ်
ကြီးထွား Curves ဘာတွေလဲ?
တိုးတက်မှုနှုန်းကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (တစ်ဦးရလဒ်ကို variable ကိုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာတွေအတွက်စာရင်းအင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်Curran & Hussong, 2002; Karney & Bradbury, 1995) ။ ဒါဟာ (ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကြောင်းယူဆ, ဒါကြောင့်မှီခို variable ကိုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောခန့်မှန်းမူလတန်းသုတေသနမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်Curran & Muthen, 1999) ။ non-အချိန်မှီခို variable တွေကို (ဥပမာ, လိင်, စမ်းသပ်အဆင့်အတန်းများနှင့်ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစု) စာရင်းအင်းညှိနှိုင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ခန့်မှန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုအကြားအပြန်အလှန်နှင့်ဤ fixed ဝိသေသလက္ခဏာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
ခြွင်းချက်မရှိနှင့်ခြွင်းချက်: တိုးတက်မှုနှုန်းခါးဆစ်ပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှိသည်။ အဆိုပါခြွင်းချက်မရှိညီမျှခြင်းအချိန်တစ် function ကိုအဖြစ်နှစ်ခုရလဒ်ကို variable တွေကို (ဥပမာတုံ့ပြန်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရမှတ်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာတုံ့ပြန်ရဲ့ထိတွေ့မှု) ၏တစ်ဦးချင်းတုံ့ပြန်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ (1) အငယ်ဆုံးအသက်အရွယ်နှင့် (2) မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်ထိတွေ့မှု၏ကနဦးတန်ဖိုးကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှော: ဒီညီမျှခြင်းဟာမှီခိုရလဒ်ကို variable တွေကိုနှစ်ခု parameters တွေကိုတစ် function ကိုဖြစ်ကြောင်းကိုယူဆတယ်။ ညီမျှခြင်းပုံစံထဲမှာ, ခြွင်းချက်မရှိတိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံဖြစ်ပါသည်:
အကျိုးit = ηi0 + ηi1(အချိန် Metric)t + အမှားit.
"i" subscript တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ထင်ဟပ်သည်အချိန်မက်ထရစ်စနစ်ကိုကာလအချိန်ကိုစကေးဖြစ်ပါသည် ηi0 ယင်းအချိန် Metric သုညဖြစ်ပါတယ်အခါငုပ်လျှိုးနေကြားဖြတ်၏တန်ဖိုးသည် ηi1 တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအတွက်အချိန်ရဲ့ငုပ်လျှိုးနေဆင်ခြေလျှောကို၎င်း, "t" subscript ညွှန်ပြသည့်ဆုတ်ယုတ်ကိန်းအဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်များသာသနာကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့်အမှားသက်တမ်း (ဥပမာ, "ဘာသာရပ်အတွင်း") တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာရေးများအတွက်ရလဒ်များ၏တိုင်းတာခြင်းအမှားများကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုသတ်မှတ်ပါတယ်။ တိုးတက်မှုကွေးမော်ဒယ်၏ဤရေးဆွဲရေး 1 မှတဆင့်သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနံပါတ်များကို4ဖြေရှင်းရန်အသုံးပြုသည်။
တိုးတက်မှုကွေးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမှာအရေးကြီးသောဆိုလို (ထိုကြောင့်ကြားဖြတ်ဖြစ်ပါသည်ηi0) နှင့်ဆင်ခြေလျှော (ηi1ညီမျှခြင်း၏) parameters တွေကို (တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားအတွက်ကြားဖြတ်နှင့်ဆင်ခြေလျှော parameters တွေကိုအပေါ်တုံ့ပြန်တိကျတဲ့ subscription ကိုသတိပြုပါ ညီမျှခြင်း (1) အထက်, "သာမန်" ဆုတ်ယုတ်) တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်တော့မှအရာတစ်ခုခု, သူတို့ကရလဒ်များ၏ကနဦးတန်ဖိုးနှင့်ဆင်ခြေလျှောကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအရန်ညီမျှခြင်းအတွက်မှီခို variable တွေကိုအဖြစ်ကုသနိုင်ပါသည်။ "ခြွင်းချက်တိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံ" ဟုလူသိများသည့်အရန်ညီမျှခြင်းသတ်မှတ်ချက် (ဥပမာ, အကြားဖြတ်နှင့်ဆင်ခြေလျှော) ကြိုတင်ခန့်မှန်းတစ်ဦးချင်းစီညီမျှခြင်း (Bollen & Curran, 2006, p ။ 9) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့သုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအရေအတွက်ကို5ဖြေရှင်းရန်ခန့်မှန်းအဖြစ်ကျား, မနှင့်လူမျိုးစုကိုအသုံးပြုပါ။
လူအပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်တစ်ပြိုင်နက်ခြွင်းချက်မရှိနှင့်ခြွင်းချက်မော်ဒယ်များခန့်မှန်းလေ့လာဆန်းစစ် -a"ကိုအပြိုင်ဖြစ်စဉ်ကို" တိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ် (Cheong, MacKinnon & Khoo, 2003) ။ တိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံဤအမျိုးအစားအကြားဆက်စပ်မှုများ၏ခန့်မှန်းချက်အဘို့ခွင့်ပြု အပြောင်းအလဲများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် အပြောင်းအလဲများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီညီမျှခြင်း၏ parameters တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှု။
ယင်းအချိန် Variable defining
အဆိုပါ ASAMS စီမံကိန်းကိုနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ဒေတာစုဆောင်းပေမယ့်လေ့လာမှုရဲ့အစမှာတုံ့ပြန်မယ့်အသက်အရွယ်အတွက်စီစဉ်ထားအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတုံ့ပြန်၏အသက်အရွယ်နှင့်အတူလေ့လာမှု၏လှိုင်း confounds ကြောင့်။ , ဒီ longitudinal ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (လေ့လာမှု၏ဆိုလိုသည်မှာလှိုင်း) သင့်လျော်သောမဟုတ်ပါ သောလေ့လာမှု၏သုံးခုလှိုင်းတံပိုး၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သုံးကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မရွေးဖြေဆိုသူမတရားဖမ်းဆီး "ဟုအဆိုပါလေ့လာမှု၏လှိုင်း" ဟုအဆိုပါဒေတာစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောမဟုတ်သောလမ်းအတွက်ပေါင်းစပ်နေကြတယ်, ဟူ တုံ့ပြန်၏အသက်အရွယ် မူလတန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာခန့်မှန်း (ဖြစ်ပါတယ်Bollen & Curran, 2006, စစ 79-81 ။ အဆိုတော် & Willett, 2003, p ။ 139) ။ တုံ့ပြန်၏လေ့လာမှုလှိုင်းများနှင့်အသက်အရွယ် Confounding အလွယ်တကူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကတည်းကအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိသည်နိုင်အနည်းဆုံး, အပြုသဘောအသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုလှိုင်းနှင့်အတူတုံ့ပြန်မယ့်အသက်အရွယ် unconfound ဖို့ကျနော်တို့အနေနဲ့ "အရှိန်ဆောင်များတွင်" ဒီဇိုင်း (သို့ data ကိုပွနျလညျဖှဲ့စညျးDuncan, Duncan, Strycker, Li, & Alpert, 1999အခန်း 6; Raudenbush & Chan, 1992) ဒါတုံ့ပြန်၏အသက်အရွယ်အကျိုးစီးပွား၏ longitudinal variable ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရလဒ်မျှမတုံ့ပြန်တစ်ခုလုံးအဖြစ်သတ်မှတ် data တွေကိုကျော်သုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်ရှိပါတယ်သော်လည်းလေ့လာမှုရဲ့ပထမဦးဆုံးလှိုင်းအတွက် 14 နှစ်ပေါင်းကြားရှိထံမှနောက်ဆုံးလှိုင်းအတွက် 18 တစ်နှစ်ကြားရှိအထိအချက်အလက်များ၏ငါးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Mplus သုံးပြီးဖွဲ့စည်းပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (Muthén & Muthén, 1998-2007) ကိုခြွင်းချက်မရှိနှင့်ခြွင်းချက်တိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးကိုခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Mplus အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းထားတဲ့အဆင့်မြင့်ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်ဆိုသောကြောင့် (Enders & Bandalos, 2001), ဒါကြောင့်ဖြေဆိုသူနမူနာများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာအပေါငျးတို့သအချိန်နဲ့တပြေးညီအသက်အရွယ်မှာလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်သည့်အခါတစ်ဦးအရှိန်မြှတိုးတက်မှုနှုန်းဒီဇိုင်းကိုအလိုအလျှောက်ကိုအသုံးပြုသည်အခါအချက်အလက်များ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများကိုထုတ်ပေးသောကွောငျ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်သောပျောက်ဆုံးနေတန်ဖိုးများရှိသည်သောဒေတာများအစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကြီးထွားကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ SEM ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုထက် ပို. ကြီးထွားကွေးတစ်ချိန်တည်းမှာခန့်မှန်းခြေခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သည့်အခါအမှုကိစ္စကဒီမှာသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ပြောင်းလဲမှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များကိုကြည့်သောအခါအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပိုလွယ်ကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကို။
ပုံ 1 ကျား, မအသုံးပြုပုံနှင့်ပြိုင်ပွဲအသုံးပြုပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းများနှင့်တစ်ခုလုံးကိုနမူနာများအတွက်လိင်ကိစ္စမီဒီယာအကြောင်းအရာရမှတ်ဖို့ထိတွေ့မှု၏ပျမ်းမျှပြသနိုင်ဖို့ဘားဇယားကိုအသုံးပြုသည်။ စုစုပေါင်းနမူနာများအတွက်ပျမ်းမျှလိင်အပြုအမူအသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးဂိုးသွင်း, နှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အသက်အရွယ်အဘို့အသက်အရွယ် 14-15 နှင့်ယုတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားများအတွက်လျော့နည်းယုတ်ထက်တန်ဖိုးများနှင့်အတူထိတွေ့မှုအတှကျအဆင်တူသည် 16 မှတဆင့် 18 ။ အဖွဲ့ခွဲရလဒ်များကို၏အောက်ဆုံးအပိုင်းများတွင်ပြသ ပုံ 1; ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစားဟစ်စပန်းနစ် (N ကို = 64) နှင့် "အခြား" (N ကို = 15) နမူနာအရွယ်အစား၏, ငါတို့အဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူအဘို့ကိုသာရလဒ်များကိုပြသပါ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှင့် Black and White နှစ်ဦးစလုံးအဘို့, ပျမ်းမျှအားလိင်ရမှတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးမြှင့်။ လိင်အကြောင်းအရာရမှတ်ဖို့ပျှမ်းမျှထိတွေ့မှုလည်းအဖြူရောင်နှင့်အထီးဖြေဆိုသူများအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးမြှင့်နေစဉ်, ပျမ်းမျှထိတွေ့ရမှတ်အမျိုးသမီးနှင့်က Black ဖြေဆိုသူဘို့အတော်လေးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ကြသည်။
Pearson ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအရလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့မှုသည်ကျိုးနွံမှုရှိပြီးအသက်အရွယ်အုပ်စုအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ အထူးသဖြင့်တုန့်ပြန်ဖြေကြားသူ၏အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်မှုကျဆင်းနေသည်။ ၁၄ နှစ်အရွယ်လေးအတွက်မူဆက်နွယ်မှုသည် .26 (N = 167, p <.05, CI = .12 မှ 0.40)၊ အသက်ဆယ့်ငါးနှစ်အတွက် .18 (N) = ၃၃၀၊ p <.05, CI = 0.08 to 0.29), တဆယ်ခြောက်နှစ်အရွယ်များအတွက် .15 (N = 490, p <.05, CI = 0.08 မှ 0.25), ဆယ့်ခုနစ်နှစ်အရွယ်များအတွက် .10 (N = 319, p > .05, CI = -0.04 to 0.18), တဆယ်ရှစ်နှစ်အရွယ်များအတွက် .11 (N = 148, p > .05, CI = -0.06 မှ 0.26 မှ) ။
တိုးတက်မှုနှုန်း Curve ရလဒ်များ: အကောင်းဆုံးအဝတ်အစားအစမ်းဝတ်အချိန် Metric ကိုခနျ့မှနျး
အချိန်နှင့်အတူခြွင်းချက်မရှိမော်ဒယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ပြမဟုတ်) ကွဲပြားအခမဲ့မက်ထရစ် (Biesanz, Deeb-Sossa, Papadakis, Bollen & Curran, 2004) အသက်အရွယ်များအတွက် linear မော်ဒယ်လိင်အညွှန်းကိန်းရလဒ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျောက်ပတ်အချိန်မက်ထရစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤညီမျှခြင်းများအတွက်အချိန်မက်ထရစ်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် အသက်အရွယ်အနုတ် 14 သို့မဟုတ်0မှတဆင့်4(ဥပမာ 14-14 = 0; 15-14 = 1; 16-14 = 2, etc) ။ ဤသည်မက်ထရစ်စနစ်ကိုကြားဖြတ်သက်တမ်းတိုင်အောင်တဆယ်လေးတစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက်ဟောကိန်းထုတ်လိင်အညွှန်းကိန်းရမှတ်စေသည်။ ယင်းမက်ထရစ် linear သောကွောငျ့, 14 မှ 16 ကနေပြောင်းလဲမှု 14 မှ 15 ကနေအပြောင်းအလဲအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အကြီးစားဖြစ်တယ်, 14 မှ 18 ကနေအပြောင်းအလဲကြီးမားအဖြစ်လေးကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိတွေ့မှုအကောင်းဆုံးလျောက်ပတ်အချိန်မက်ထရစ်ကို non-linear ကြီးနှင့်အချိန်မက်ထရစ်ကွဲပြားဖို့ခွင့်ပြုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်အကြံပြုကောင်းတစ်လျောက်ပတ်မက်ထရစ် 0, 1, 1.5, 2, 2.25 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ 14 မှ 16 ကနေပြောင်းလဲမှု 1.5 မှ 14 ကနေအပြောင်းအလဲအဖြစ်အကြီးစားအဖြစ်သာ 15 ကြိမ်ဖြစ်ပြီး, 14 မှ 18 ကနေပြောင်းလဲမှု 2.25 မှ 14 ကနေအပြောင်းအလဲအဖြစ်အကြီးစားသာ 15 ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Non-linear ကိစ္စတွင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိတွေ့မှု၏ဆင်ခြေလျှောအပြုသဘောလျှင်, ဤအချိန်မက်ထရစ်တိုးပွားလာအသက်အရွယ်နှင့်အတူ flattens တစ်ဦးအပြုသဘောဆင်ခြေလျှောကိုထုတ်လုပ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိတွေ့မှု၏ဆင်ခြေလျှောအနုတ်သည်မှန်လျှင်, တိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ flattens တဲ့အနုတ်လက္ခဏာဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါသည် ခန့်မှန်းပါတယ်။
ခြွင်းချက်မရှိကြီးထွား Curve ရလဒ်များ
စားပွဲတင် 1 ချွင်းချက်မရှိတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရလဒ်များကိုတင်ပြသွားပါသည်။ မော်ဒယ်များ၏ကြံ့ခိုင်မှုကောင်းလှ၏။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းရလဒ်များကို 1.82 + .89 (အချိန်) ၏ခန့်မှန်းညီမျှခြင်းကိုပြသ။ အဆိုပါ 1.82 14 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက်လိင်အညွှန်းကိန်းများခန့်မှန်းတန်ဖိုးကိုသည်နှင့် .89 ၏ဆင်ခြေလျှောတစ်ဖွဲ့လုံးကနမူနာများအတွက်အသက်အရွယ် increment နှုန်းနီးပါးတဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းယူနစ်တစ်ခုတိုးဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကြားဖြတ်နှင့်ဆင်ခြေလျှောအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအသက်အရွယ်အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးလာသည့်နှေးကွေးသောဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောလိင်အညွှန်းကိန်း၏ကနဦးတန်ဖိုးပိုမိုမြင့်မားခြင်း, နိမ့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤသည်0ထံမှ7သွားသည့်အညွှန်းကိန်း၏မျက်နှာကျက်သက်ရောက်မှုပေးထားတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကြားဖြတ်နှင့်ဆင်ခြေလျှောသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိသည်, ဒါကြောင့်တုံ့ပြန်ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါဤ parameters တွေကိုများတွင်ဘာသာရပ်ကွဲပြားမှုများအကြားရှိပါတယ်
ခြွင်းချက်မရှိစင်ပြိုင် Process ကိုကြီးထွားလိင်ရမှတ်အညွှန်းကိန်း၏ Mode ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာ (N ကို = 506) ကို Exposure များအတွက်ရလဒ်များ
အဆိုပါကြားဖြတ်မစောင်းမပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအတွက်ခြွင်းချက်မရှိညီမျှခြင်း, အဟောင်းတွေဖြေဆိုသူနှင့်အချိန်ကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်အပြုသဘောဆောင်တိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ် 041 တစ်နှစ်ကြားရှိများအတွက်ပျမ်းမျှအားထိတွေ့မှုထက်နိမ့်ညွှန်ပြ -.025 + .14 (အချိန်) ဖြစ်ပါသည် သုညကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံး parameters တွေကိုဖြေဆိုသူအချိန်ကျော် variable ကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခြွင်းချက်မရှိပျမ်းမျှအားရလဒ်များကိုသေချာပေါက်အချို့သောလူမျိုးကွဲများ၏ကိုယ်စားလှယ်မကျမည်အကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအတွက်ကြားဖြတ်နှင့်ဆင်ခြေလျှောအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်တိုးမြှင့်နှေး, ထိတွေ့မှု၏ကနဦးတန်ဖိုးကိုပိုမိုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။
သုတေသနမေးခွန်းများကို 2,3နှင့်4နှစ်ခုညီမျှခြင်းဖြတ်ပြီးကြားဖြတ် / ဆင်ခြေလျှောဆက်စပ်မှုများကဖြေကြားထားပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆင်ခြေလျှောခန့်မှန်းထိတွေ့မှု၏ကနဦးတန်ဖိုးကိုများအတွက်ဆက်စပ်မှု (-.14 ဖြစ်ပါသည်p > .05) နှင့်လိင်အပြုအမူ၏ကန ဦး တန်ဖိုးနှင့်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ slope အကြားဆက်စပ်မှု -.21 ( p <.05) ။ ထို့နောက်နမူနာတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ထိတွေ့ခြင်း၏ကန ဦး တန်ဖိုးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သော်လည်းလိင်အပြုအမူ၏ကန ဦး တန်ဖိုးသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူပိုမိုမြင့်မားသောကန ဦး တန်ဖိုးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှေးကွေးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအကြောင်းအရာ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် slope တန်ဖိုးနှစ်ခုအကြားဆက်စပ်မှုသည် .09 ဖြစ်ပြီး၊ အပြုသဘောဖြစ်သော်လည်းသုညမှသိနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ နမူနာတစ်ခုလုံးအနေဖြင့်လိင်အကြောင်းအရာနှင့်လိင်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများပြောင်းလဲခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခြွင်းချက်ဆန်းစစ်ချက်အရလိင်အပြုအမူနှင့်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုတင်ပြသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမှ Exposure အကြားဖြေဆိုသူလက်ခဏာမြားနှငျ့အစည်းအရုံး: CONDITION ကြီးထွား Curve ရလဒ်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှု၏တိုးတက်မှု curves အတွက်တုံ့ပြန်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ပါချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ပြည့်စုံသောထုံးစံ၌သုတေသနဆိုတဲ့မေးခွန်းကို5ဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကျား, မ (ဆိုလိုသည်မှာ, အထီး) နှင့်တုံ့ပြန်၏ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာညီမျှခြင်းရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများနှင့်ထိတွေ့မှု၏ parameters များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ရလဒ်မှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 2။ အဆိုပါခန့်မှန်းပေးထားသည်ရိုးရှင်းသောတိုးတက်မှုနှုန်းညီမျှခြင်းရည်ညွှန်း White ကအမျိုးသမီး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောအပေါငျးတို့သခြွင်းချက်ဆင်ခြေလျှောသက်ရောက်မှုသိသိသာသာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးဖြေဆိုသူများအတွက် (.9 ခန့်) တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်း (ဆိုလိုသည်မှာယင်းကြားဖြတ်ညီမျှခြင်း) ၏ပျှမ်းမျှအဆင့်ကိုအစောဆုံးအသက်အရွယ်မှာအဖြူထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာ Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူအတူဖြေဆိုသူခွဲခြားတယ်။ ချွင်းချက်မရှိရလဒ်များကိုနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ကြားဖြတ် / ဆင်ခြေလျှောဆက်စပ်မှုအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေအနေအရစင်ပြိုင် Process ကိုကြီးထွားလိင်ရမှတ်အညွှန်းကိန်း၏ Mode ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာ (N ကို = 505) ကို Exposure များအတွက်ရလဒ်များ
မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအဘို့ဤခြွင်းချက်မော်ဒယ်ကနဦးအဆင့်ကို (ဥပမာကြားဖြတ်) နှင့်ဆင်ခြေလျှောကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ဦးစလုံးကျားနှင့်လူမျိုးစုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ရှိပါတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ အဆိုပါကြားဖြတ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, 14 မှာအမျိုးသမီးအမျိုးသားများနှင့် Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူ 14 မှာထက်သိသိသာသာပိုပြီးလိင်အကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့နေကြအဖြူထက်သိသိသာသာပိုပြီးလိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထိတွေ့မှုအတွက်တိုး (ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါထိတွေ့မှုညီမျှခြင်း၏ဆင်ခြေလျှော) အဖြူသည်ထက် Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူဘို့သိသိသာသာနိမ့်သည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်ထိတွေ့မှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ဆင်ခြေလျှောအကြားမျှကွာခြားချက်ရှိပါသည်။
ပေါင်းလဒ်မှာခြွင်းချက်မော်ဒယ်ရလဒ်များကိုမှာပြသထားတဲ့ စားပွဲတင်2White vs. လူမည်းတွေနှင့်ဟစ်စပန်းနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်ဖြေဆိုသူအဖြစ်အထီး vs. အမျိုးသမီးများအတွက်ထိတွေ့မှု၏ကြားဖြတ်ဖမ်းယူအတွက်ကွဲပြားမှုများအကြားကြားဖြတ်ဖမ်းယူအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ ကျား, မသို့မဟုတ်အပြေးပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစုများ၏ function ကိုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏တောင်စောင်းမရှိသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပေမယ့်အပြင်, White vs. လူမည်းတွေနှင့်အစွမ်းကုန်များအတွက်ထိတွေ့မှု၏တောင်စောင်းများတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါခြွင်းချက်ရလဒ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကျနော်တို့တိကျတဲ့ကျားနှင့်လူမျိုးစုအုပ်စုများအတွက်ခန့်မှန်းပျမ်းမျှ ( "fixed သက်ရောက်မှု") ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်နိုင်ပါတယ်။ သောကြောင့်အစွမ်းကုန်များအတွက်အသေးစားနမူနာအရွယ်အစား, ငါတို့သည်သာဖြူမှဥပမာများနှင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူတားမြစ်ထားသည်။ ပုံ2(ဘယ်ဘက်ဝင်ရိုးပေါ်) ကွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ခန့်မှန်းဘယ်နေရာတွေမှာနှင့်လူမျိုးစုအားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးများအတွက် (လက်ျာဘက်ဝင်ရိုးပေါ်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်း, ကြှနျုပျတို့ထားပြီးတောင်စောင်းအဘယ်သူအားမျှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော်လည်း Black ကမြီးကောင်ပေါက်များအတွက်ကြားဖြတ်ဖမ်းယူ White ကမြီးကောင်ပေါက်ကနေကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကိုငါသိ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတှကျရလဒျမြားကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ (ကျားမဖြစ်စေ၏) အဖြူရောင်ဖြေဆိုသူအသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးအပြုသဘောပြောင်းလဲမှုကိုပြသနေစဉ် (ကျားမဖြစ်စေ၏) Black ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ် function ကိုအဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်တောင်စောင်းရှိသည်။ အဖြူရောင်ဖြေဆိုသူအသက်အရွယ် 14 မှာလိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏နိမ့်ဆုံးကနဦးတန်ဖိုးများရှိသည်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပြသပါ။ ဒီအတိုးအထူးသဖြင့်အဖြူရောင်အထီးအဘို့မှတ်သားသည်။
အဆိုပါ differential ကိုဆင်ခြေလျှောပုံစံများလျှောစောက်နှင့်ကြားဖြတ်သည့်ထိတွေ့မှုညီမျှခြင်းနှင့်လိင်အပြုအမူကိုညီမျှခြင်း၏ဆင်ခြေလျှောခြင်းနှင့်ကြားဖြတ်အကြားအပေါငျးတို့သဆက်စပ်မှုအဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအထိတွေ့မှု / လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်, ခြွင်းချက်မရှိဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖြူဘို့သီးခြားစီခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 3။ ဒါဟာ (အကြောင်းကိုတဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယူနစ်အဖြူရောင်ဖြေဆိုသူဘို့ထက်က Black ဖြေဆိုသူအဘို့အမြင့်မားဂိုးသွင်း) ကလိင်ညီမျှခြင်းလျှောစောက် (တစ်နှစ်လျှင်အကြောင်းကိုတဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းရမှတ်တိုး) ဒါပေမယ့်အသက်အရွယ် 14 မှာကွဲပြားခြားနားသောကနဦးပျမ်းမျှများအတွက်အုပ်စုနှစ်စုအဘို့အလွန်ဆင်တူရလာဒ်များပြသထားတယ်။ ဒါပေမယ့်နှစ်ခုညီမျှခြင်း၏ parameters တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုနှစ်ခုအုပ်စုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မရအတော်လေးကစာရင်းအင်းသိသာပေမယ့်ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများအတွက်အပြောင်းအလဲအကြားဆက်စပ်မှု, (White ကဖြေဆိုသူများအတွက်အပြုသဘောဆောင်ဖြစ်ပါသည်r = .46, p = .064) ဒါပေမယ့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သုညက Black ဖြေဆိုသူများအတွက် (r = .03, p = .85) ။ တကယ်တော့, က Black ဖြေဆိုသူအဘို့ကိုသာကြားဖြတ် / ကြားဖြတ်ဆက်စပ်မှု (r = .26) နှစ်ခုရလဒ်များဖြတ်ပြီးသိသိသာသာပင်ဖြစ်သည်: ဤ 14 မှာလိင်ရမှတ်အပေါ်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးကိုမှာဖြစ်ခြင်းတူအသက်အရွယ်မှာထိတွေ့မှုတခုပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, အပေါငျးတို့သ parameters တွေကိုအဖြူရောင်ဖြေဆိုသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်အနီးသိသိသာသာရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ, White အနက်လိင်အကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏မြင့်မားကနဦးအဆင့်တွင်, အချိန်ကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးသည်။ အလားတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကနဦးအဆင့်တွင်, အချိန်ကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်ပိုမိုနှေးကွေးကြီးထွားမြင့်မား။ ထို့အပြင်၌၎င်း, Black ကဖြေဆိုသူဆင်တူသည်ကြားဖြတ် / ကြားဖြတ်ဆက်စပ်မှုအပြုသဘောနှင့်သိသိသာသာပင်ဖြစ်သည် (r = .42) ။ ၏သင်တန်း, ဆက်စပ်မှုများ၏ဂရပ်များတွင်ပြသခဲ့နှစ်ခုရလဒ်များများအတွက်တောင်စောင်းများနှင့်ကြားဖြတ်ဖမ်းယူ၏အုပ်စု-တိကျတဲ့ပုံစံများကိုထင်ဟပ် ပုံ 2: Black များအတွက်ထိတွေ့မှုအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သုညသောကွောငျ့, ဒီဆင်ခြေလျှော parameter သည်လိင်အပြုအမူကိုညီမျှခြင်းအပေါငျးတို့သ parameters တွေကိုနှင့်အတူအနိမ့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသရပါမည်။
ခြွင်းချက်မရှိစင်ပြိုင် Process ကိုကြီးထွားလိင်ရမှတ်အညွှန်းကိန်း၏မော်ဒယ်နှင့်အဖြူရောင်နှင့်သီးခြား Black ကစစ်တမ်းဖြေကြားသူများအဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့များအတွက်ရလဒ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရှုပ်ထွေးတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင်းဆိုလို။ ပထမဦးစွာထိတွေ့မှုအတှကျတိုးတကျမှုဘယ်နေရာတွေမှာလဲ linear မရှိကြပေ။ ထို့အပြင်ထိတွေ့တောင်စောင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုတစ်ပုံစံတည်းအပြုသဘောမဟုတျပါ, Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ဖြေဆိုသူကဒီမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးအသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ကျဆင်းမှုပြသပါ။ Non-Linear နှင့်အနုတ်လက္ခဏာတောင်စောင်းတစ်ဦးအုပ်စုနှင့်အခြားအုပ်စုတွင်အပြုသဘောတောင်စောင်းနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအတွက်ပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှော၏ပြောင်းလဲမှု၏ဆင်ခြေလျှောအကြားအလုံးစုံဆက်စပ်မှု attenuate ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကနမူနာများအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့ပြောင်းလဲမှုများအကြားဆက်စပ်မှု .09 ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိတွေ့မှုများအတွက် differential ကိုတောင်စောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှထိတွေ့မှုများအကြားအုပ်စုတိကျတဲ့ဆက်စပ်မှုက Black ဖြေဆိုသူနှိုင်းယှဉ်ဖြူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မီဒီယာသက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးရေး / တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများ၏ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆသစ်တစ်ခုတဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။ ကနေလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား ဘရောင်း et al ။ (2006) သူတို့ရဲ့ Black က counterparts တွေကိုထက် White ကမြီးကောင်ပေါက်ကိုပိုမိုမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကြောင့်ထိခိုက်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ ထိတွေ့မှုပြောင်းလဲမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအကြားဆက်စပ်မှုက Black ဖြေဆိုသူသည်ထက်ဖြူဖြေဆိုသူဘို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တောင်မှကျနော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးအစောဆုံးအသက်အရွယ်မှာဖြေဆိုသူအကြား Pre-တည်ဆဲတိုင်းရင်းသားနှင့်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ ကနေရလဒ်များ O'Sullivan, Cheng, Harris, & Brooks-Gunn (၂၀၀၇) (ကျားမဖြစ်စေ၏) ပျမ်းမျှ Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်တုံ့ပြန်အသက်အရွယ် 14 မှာကတခြားဖြေဆိုသူထက်ပိုမိုမြင့်မားတစ်ဦးထက်ပိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြသသောငါတို့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ ထို့ပြင်အနက်, အဖြူထက်ပိုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပေးထား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအပေါ် Black နဲ့ White ကဖြေဆိုသူအကြားကနဦးကွဲပြားခြားနားမှုပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အစွမ်းကုန်နှင့်အဖြူနှင့်အခြားသူများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာပျှမ်းမျှထိတွေ့မှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,, ဒီအမှု၌, တစ်ဦးကျားအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိသည်: အသက်အရွယ် 14 မှာမိန်းမတွေကယောက်ျားတူညီတဲ့အသက်အရွယ်မှာလုပ်ပေးထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပိုမိုမြင့်မားထိတွေ့မှုရှိသည်။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအပြေးပြိုင်ပွဲ / တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအတွက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုကိုခြေရာခံဖို့ longitudinal ဒေတာအသုံးပြုမျှမကအခြားလေ့လာမှုကိုသိ, ဒါကြောင့်, ဤရလာဒ်များဖြစ်ကြသည်ကိုဘယ်လိုပုံမှန်ဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
တဦးတည်း, ဤတွေ့ရှိချက်များ၏နှစ်ဦးစလုံး၏ဆိုလို (အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းများနှင့်မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုများအကြားကျဆင်းနေလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းဆက်စပ်မှု) လက်ရှိနမူနာအပြည့်အဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့အကြားအသင်းအဖွဲ့ကိုဖမ်းယူဖို့ "အသက်ကြီးလွန်း" ဖြစ်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါသည် မီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အဲဒီအသက်အရွယ်မှာ 14 ဟစ်စပန်းနစ်နှင့်အနက်ရောင်ဖြေဆိုသူပြီးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှစ်ဦးစလုံးမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအဖြူရောင်ဖြေဆိုသူကှာခွားဖြစ်ပါသည်။ လိင်အညွှန်းကိန်းဟာသုညက start အချက်နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအညွှန်းကိန်းသည် ဖြစ်. အချို့အသက်အရွယ်မှာအားလုံးဖြေဆိုသူတစ်ဦးသုညတန်ဖိုးကိုမှာတည်ကြသည် ဖြစ်. , ဒါကြောင့်အပြိုင်ဖြစ်ဖို့အချိန်ကိုကျော်သူတို့ရဲ့ဆင်ခြေလျှောအဘို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကဒီမှာစောငျ့ရှောကျဖြေဆိုသူပြီးသားအသက်အရွယ် 14 အားဖြင့်ပျှမ်းမျှတန်ဖိုးစဉ်နဲ့ကွဲသွားခဲ့ရတယ်ကြတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု, ကြှနျုပျတို့မသိကွပါ တစ်ဦး လူအပေါင်းတို့သည်ဖြေဆိုသူအတူတူပင်တန်ဖိုးကိုမှာစတင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီနေရာမှာလည်းကျနော်တို့ကနမူနာထဲတွင်အစောဆုံးအသက်အရွယ်မှာဖြေဆိုသူအကြား Pre-ရှိပြီးသားကွဲပြားခြားနားမှုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်း။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုတိုင်း၏လက်ရှိနည်းလမ်းလွယ်ကူစွာတစ်ဦးနုပျိုသောလူဦးရေမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အမူအကျင့်များနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဖြစ်ကောင်းလိင်အပြုအမူစကေး၏စစ်မှန်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုလိုအပ်သောဖွစျလိမျ့မညျတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်လူဦးရေရန်ချိန်ညှိတဲ့ "လိင်အပြုအမူစကေး" နည်းပါးလာ "လိင်ပစ္စည်း" နှင့်ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးနှင့် "Pre-coital" အပြုအမူတွေ addressing ကိုပိုပြီးပစ္စည်းများရှိသည်မယ်လို့တစ်စကေးဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ, Jakobsen (1997) အသက် 13-16 နှစ်ပေါင်းထံမှမြီးကောင်ပေါက်များ၏တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်နျောနမူနာအပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူအာရုံစူးစိုက် "နမ်း", "ပြင်သစ်အနမ်း", "အလင်း petting," နှင့် "မိုးသည်းထန်စွာ petting" တည်ငြိမ်, မယ် "non-coital အပြုအမူတွေ၏အခက်အခဲချိန်ခွင်ခဲ့ပါတယ်။ " O'Sullivan et al ။ (2007) "စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် partner ၏အတွေး", "လက်တွဲဖော်ရဲ့မိဘများတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး" နှင့် "လက်ဆောင်တွေဖလှယ်" ကဲ့သို့ 12 နှစ်ပေါင်းအဖြစ်အဟောင်းနှင့်အသုံးပြုသောအပြုအမူအစီရင်ခံစာပစ္စည်းများငယ်ရွယ်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်, လူမှုရေးရင်ခုန်စရာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ O'Donnell, Stueve, Wilson-Simmons, Dash, Agronick & JeanBaptiste (၂၀၀၆)6ထံမှကောက်ယူဒေတာth တန်းကျောင်းသူလေး (ပျမ်းမျှအသက် 11 ခဲ့သည်) နှင့်ကဲ့သို့သော Pre-coital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပါဝင်သည် "သင်အစဉ်အဆက်ကောင်လေးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလက်အားကျင်းပဖူးသလော" နှင့် "သငျသညျအစဉျအမွဲအချိန်ကြာမြင့်စွာနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုနမ်းသို့မဟုတ်ဖက်ရှိပါသလား?" ဒါဟာဖွယ်ရှိသည် ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းများ Pardun, L'Engle နဲ့ဘရောင်းကခြောက်လမီဒီယာအတွက်သူတို့၏ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ" ထိတွေ့မှုပစ္စည်းများ 25% ကြားဆက်ဆံရေးဆက်စပ်ပါဝင်သည်တွေ့ရှိခဲ့အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အငယ်ဖြေဆိုသူတစ်ဦး "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူညွှန်းကိန်း" ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်မယ်လို့ ထိုကဲ့သို့သောရင်ခုန်စရာ Crush, ချိန်းတွေ့, အိမ်ထောင်နှင့်ကွာရှင်းအဖြစ်အကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များကို (Pardun, L'Engle နဲ့ဘရောင်း, 2005, p ။ 86) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဖို့ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာကြောင့်နမူနာမဟာဗျူဟာဤတွေ့ရှိချက်များ၏ယေဘုယျသူတို့သာလူငယ်လေ့လာမှုမှာစာရင်းသွင်းဖို့ကန့်သတ်သည်။ သို့သော်တွေ့ရှိချက်ကိုပိုမိုကိုယ်စားလှယ်နမူနာအနေဖြင့်ဒေတာများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်အစွမ်းကုန်နှင့်အခြားတိုင်းရင်းသား / လူမျိုးရေးအုပ်စုများ၏အသေးစားနမူနာအရွယ်အစားသည်ဤအုပ်စုများအတွင်းမတည်မငြိမ်ခန့်မှန်းမှု။ တဦးတည်းကိုအခြားနိဂုံးချုပ်မှတ်သားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်ကမေးခွန်းဖြေကြားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုသို့မဟုတ်ဆင်ခြေလျှောအတိုင်းအရှည်နဲ့တူအချို့တစ်ခုတည်းအကျဉ်းချုပ်စာရင်းဇယားအဲဒီမှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြု "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးကဘာလဲ?" ၏ပေါင်းစပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အမျိုးမျိုးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံများ နှစ်ဦးစလုံးရလဒ်များအဘို့အအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးဆင်ခြေလျှောခြင်းနှင့်ကြားဖြတ်ကွဲပြားခြားနားမှုခုခံကာကွယ်ဖို့အကျဉ်းချုပ်အတိုင်းအတာမဆိုမျိုးခက်ခဲပါစေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားရှုပ်ထွေးဆက်ဆံရေးနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်အငယ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ပိုကြီးပြီးပိုသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော longitudinal နမူနာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
လိင်အညွှန်းကိန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့ခါးဆစ်၏တောင်စောင်းများနှင့်ကြားဖြတ်ဖမ်းယူတို့တွင်အသင်းအဖွဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ဒီမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခဖြေရှင်းရန်မထားဘူး။ ဤအ data တွေကိုတခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာဆက်ဆံရေးမျိုးရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ-ထိတွေ့ Non-တဲ့ request ကိုလည်ပတ်ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့်သုတေသနပြု၏ဤဧရိယာ၌ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခမူလကပင်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ် (Bleakley, Hennessy, Fishbein & Jordan, 2008) ထိတွေ့မှုအပြုအမူများနှင့်အမူအကျင့် (ထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ရသောSlater, 2007) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးများတစ်ပြိုင်နက်သဘောသဘာဝစုံစမ်းစစ်ဆေးအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအချက်ကိုခိုင်လုံကြောင်းအခြားသုတေသနပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
ဤစာအုပျကလေးကျန်းမာရေးနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (NICHD) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေ Grant ကနံပါတ် 5R01HD044136 နေဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ခုတည်းကိုသာစာရေးသူ၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သေချာပေါက်အဆိုပါ NICHD ၏တရားဝင်အမြင်များကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။
မိုက်ကယ် Hennessy Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဆက်သွယ်ရေးများအတွက် Annenberg School တွင်စီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏အဓိကသုတေသနအကျိုးစီးပွားအခြေခံအဆောက်အဦးညီမျှခြင်းမော်ဒယ်နှင့်သီအိုရီ-based အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်၏အကဲဖြတ်များ၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
မေီ Bleakley Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဆက်သွယ်ရေးများအတွက် Annenberg School မှာတစ်သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွားဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမူဝါဒများ, ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်သီအိုရီများနှင့်ကျန်းမာရေးအမူအကျင့်အပေါ် Contextual လွှမ်းမိုးမှုများပါဝင်သည်။
မာတင် Fishbein အဆိုပါဟယ်ရီ C. Cole, Jr. Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှဆက်သွယ်ရေးများအတွက် Annenberg School မှာဆက်သွယ်ရေး၏ပုံမှန်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွားလယ်ပြင်၌ယုံကြည်ချက်, သဘောထား, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်း settings ကိုနှင့်ကျန်းမာရေး-related အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုကြားဝင်၏ထိရောက်မှုကို၏အကဲဖြတ်ပါဝင်သည်။
မေီယော်ဒန်မြစ် မီဒီယာများနှင့်သူမသားသမီးရဲ့မီဒီယာမူဝါဒအပေါ်သုတေသနပြုကြီးကြပ်ဘယ်မှာ Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်၏ Annenberg ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒရေးစင်တာများ၏ဖွံ့ဖြိုးဆဲကလေးကဏ္ဍ၏ ddirector ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏လေ့လာမှုများသုံးနာရီစည်းမျဉ်း, ကလေးအထူးကု '' မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုချက်များနှင့်ကလေးများမှ Self-ထိန်းညှိအစားအစာစျေးကွက်မှစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ V-Chip ဥပဒေပြဌာန်း, အမေရိကန်အကယ်ဒမီအဖြစ်လူသိများပညာရေးရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အများပြည်သူဧည့်ခံဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာဂျော်ဒန်နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးချ / ပေါ်လစီသုတေသန Award ဆုနှင့်အမျိုးသားဆက်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးရဲ့ Stanley အယ်လ် Saxon အသုံးချသုတေသနဆုကို၏လက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
Ajzen ငါAlbarracínဃကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အပြုအမူကိုပြောင်းလဲ: တစ်နှီးနှောအရေးယူချဉ်းကပ်။ ခုနှစ်တွင်: Ajzen ငါAlbarracín: D, Hornik R ကို, အယ်ဒီတာများ။ ကနျြးမာရေးအပြုအမူ၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း။ လောရင့် Erlbaum; Mahwah: 2007 ။ စစ။ 1-22 ။
Ashby S က, Arcari ကို C, Edmonson ခရုပ်မြင်သံကြားငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်၏အန္တရာယ်။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာ၏မော်ကွန်း။ 2006;160: 375-380 ။
Aubrey J ကို, Harrison K ကို Kramer က L, Yellin ဂျေအရောင်းသွက်အချိန်ကိုက်နှိုင်းယှဉ်: လိင် oriented ရုပ်မြင်သံကြားမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားများက '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန။ 2003;30: 432-460 ။
Barnes က G, Reifman တစ်ဦးက, Farrell M က, Dintcheff ခဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်အလွဲသုံးစားလုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ: တစ်ဦးကခြောက်လှိုင်းငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းပုံစံ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်။ 2000;62: 175-186 ။
Biesanz J ကို, Deeb-Sossa N ကို, Papadakis တစ်ဦးက, Bollen K ကို Curran P. တိုးတက်မှုနှုန်းကွေးမော်ဒယ်များခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူခြင်းအတွက်အချိန် coding ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ။ 2004;9: 30-52 ။ [PubMed]
Bleakley တစ်ဦးက, Fishbein M က, Hennessy M က, ဂျော်ဒန်တစ်ဦးက, Chernin တစ်ဦးက, Stevens R. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏တုံ့ပြန်အခြေစိုက် Multi-မီဒီယာအစီအမံ Developing ။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ။ 2008;2: 43-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bleakley တစ်ဦးက, Hennessy M က, Fishbein M က, ဂျော်ဒန်အေဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများအလုပ်လုပ်တယ်: မီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ မီဒီယာစိတ်ပညာ။ 2008 လာမည့်,
Bollen K ကို Curran P. ငုပ်လျှိုးကွေးမော်ဒယ်များ။ Wiley; နယူးဂျာစီ: 2006 ။
ဘရောင်း J ကို, မျက်နှာသစ်အက်စ်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ လိင်တူချစ်ခြင်း၏ဂျာနယ်။ 1991;21: 77-91 ။ [PubMed]
ဘရောင်း JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo, G, Kenneavy K ကို Jackson က C. Sexy မီဒီယာကိစ္စ: ဂီတ, ရုပ်ရှင်, တီဗီ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Exposure ကျောဖြူမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2006;117: 1018-1027 ။ [PubMed]
Buhi အီး, ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကို၏ Goodson P. ခန့်မှန်း: တစ်သီအိုရီ-guided စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2007;40: 4-21 ။ [PubMed]
Cheong J ကို, MacKinnon: D, အပြိုင်ဖြစ်စဉ်ကိုငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းကွေးမော်ဒယ်သုံးပြီးအာမခံလုပ်ငန်းစဉ်၏ Khoo အက်စ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း။ 2003;10: 238-262 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Chia S ကို, မီဒီယာလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းများအထင်လွဲမှားမှုများအထောက်အကူပြုဘယ်လို Gunther အေ။ Mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ 2006;9: 301-320 ။
Collins R ကို, Elliot M ကို, မီဒီယာသက်ရောက်မှုမှ Miu အေချိတ်ဆက်ခြင်းမီဒီယာအကြောင်းအရာ: အဆိုပါ RAND ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လိင် (TAS) လေ့လာမှု။ ခုနှစ်တွင်: ဂျော်ဒန်, Kunkel, Manganello, Fishbein, အယ်ဒီတာများ။ မီဒီယာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး: အကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်းမှတစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်များချဉ်းကပ်။ Routledge; နယူးယောက်: 2007 ။ အတွက်လာမည့်။
Collins R ကို, Elliot M က, Berry ဟာက S, Kanouse: D, Kunkel: D, Hunter က S, ရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Miu အေအကဲခတ်လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစတင်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကလေးအထူးကု။ 2004;114: e280-e289 ။ [PubMed]
နောက်ခံသမိုင်းနှင့် RAND ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကို: ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အမေရိကန်လူငယ်အပေါ်ရိုက်ခတ်မှု Collins R. လိင်။ ကလေးနှင့်မြောက်အမေရိက၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2005;14: 371-385 ။ [PubMed]
Curran P ကို, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံအချက်အလက်များ၏ Hussong အေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: ငုပ်လျှိုးကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခုနှစ်တွင်: Moskowitz, Hershberger, အယ်ဒီတာများ။ ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံဒေတာနှင့်အတူ intraindividual အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမော်ဒယ်။ လောရင့် Erlbaum; Mahwah: 2002 ။ စစ။ 59-85 ။
Curran P ကို, Muthen ခဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသုတေသနအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသီအိုရီကိုစမ်းသပ်ဖို့ငုပ်လျှိုးကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏လျှောက်လွှာ။ ရပ်ရွာစိတ်ပညာ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999;27: 567-595 ။ [PubMed]
Duncan က T က, Duncan က S နဲ့, Strycker L ကိုလီက F, Alpert အေ variable ကိုကြီးထွားကွေးမော်ဒယ်ငုပ်လျှိုးဖို့မိတ်ဆက်စကား။ လောရင့် Erlbaum; Mahwah: 1999 ။
သက်တူရွယ်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Eggermont အက်စ် Young ကမြီးကောင်ပေါက် '' သညာ: ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှု၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ကလေး - စောင့်ရှောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ 2005;31: 459-468 ။
Ender ကို C, Bandalos C. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များအတွက်ပျောက်ဆုံးနေဒေတာအတွက်အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း၏ဆွေမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း။ 2001;8: 430-457 ။
Escobar-Chaves S က, Tortolero S က, Markham ကို C, အနိမျ့ B, Eitel P ကို, မီဒီယာ၏ Thickstun P. သက်ရောက်မှုဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူပေါ်မှာ။ ကလေးအထူးကု။ 2005;116: 303-326 ။ [PubMed]
Fergus က S, Zimmerman M က, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏ဝဲလ် C. ကြီးထွားဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007;97: 1096-1101 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Fishbein အမ် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်သီအိုရီ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု။ 2000;12: 273-278 ။ [PubMed]
ချုပ်အချိန်ကွန်ယက်ကိုပရိုဂရမ်းမင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Hetsroni အေသုံးဆယ်စုနှစ်: တစ်ဦးက longitudinal Meta-သရုပ်ခွဲပြန်လည်သုံးသပ်။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်။ 2007;57: 318-348 ။
Hennessy M က, Bleakley တစ်ဦးက, Fishbein M က, ဂျော်ဒန်အေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသီအိုရီနှင့်လူမှုရေးရိုဆက်နွယ်နေပါသည်သုံးပြီးဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအညွှန်းကိန်းအားအတည်ပြု။ AIDS နှင့်အပြုအမူ။ 2008;8: 321-31 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား noncoital လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကအတွက်တိုးတက်မှု၏ Jakobsen R. ဇာတ်စင်: အ Mokken စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း application တစ်ခု။ အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 1997;27: 537-553 ။
တိုးတက်မှုနှုန်းခါးဆစ်၏စိတ်ဖြာဖို့နိဒါန်း: အိမ်ထောင်ရေးမှာ longitudinal ပြောင်းလဲမှုအကဲဖြတ် Karney B, Bradbury တီ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုဂျာနယ်။ 1995;57: 1091-1108 ။
Kunkel: D, Biely အီး, Eyal K ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်-Ferrar K ကို Donnerstein အီး, Fandrich R. TV3 အပေါ်လိင်: အခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကမှတစ်ဦးကနှစ်နှစ်တကြိမ်အစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; Menlo Park, CA: 2003 ။
Kunkel: D, ကိုင်တွယ်-Farrar K ကို Biely အီး, Donnerstein အီး TV2 အပေါ်လိင်: အခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကမှတစ်ဦးကနှစ်နှစ်တကြိမ်အစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; Menlo Park, CA: 2001 ။
Kunkel: D, Eyal K ကို Finnerty K. တီဗီ 2005 အပေါ်လိင်: တစ်ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းကအစီရင်ခံစာ။ အဆိုပါခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; Menlo Park, CA: 2005 ။
Kunkel: D K ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်, သားသမီးမရှိတဲ့ C. မိသားစုနာရီရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများ: အကြောင်းအရာနှင့်စကားစပ်။ Children Now & Kaiser မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း၊ Oakland & Menlo Park, CA: ၁၉၉၆ ။
သည် L'Engle K ကိုဘရောင်းက J ကို, Kenneavy K. အဆိုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အရေးပါသောအခြေအနေတွင်ရှိပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2006;38: 186-192 ။ [PubMed]
သည် L'Engle K ကိုဂျက်ဆင်ကို C, လိင်ဆက်ဆံခြင်းစတင်မှဘရောင်းဂျေအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' သိမြင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အမြင်များ။ 2006;38: 97-105 ။ [PubMed]
Mokken R. စကေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတစ်ဦးကသီအိုရီများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ Mouton; အဆိုပါဟိဂ်: 1971 ။
Muthén L ကို, Muthénခ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန်, ပဉ္စမထုတ်ဝေ။ Muthénနှင့်Muthén; Los Angeles မြို့: 1998-2007 ။
O'Donnell, L, Stueve တစ်ဦးက, Wilson က-Simmons R ကို, မြို့ပြငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား K ကို Agronick, G, JeanBaptiste V. လိင်ကွဲအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ Dash ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်။ 2006;26: 87-109 ။
O'Sullivan L ကို, Cheng က M, Harris ကငွေကျပ်, Brooks-ဂွန်ဂျေငါဘာတစ်ခုမှသင်၏လက်ကိုကိုင်ထား: ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေးအတွက်, လူမှုရေးရင်ခုန်စရာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏တိုးတက်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အမြင်များ။ 2007;39: 100-107 ။ [PubMed]
Pardun ကို C, L'Engle K ကိုဘရောင်းကဂျေရလဒ်များမှထိတွေ့မှုချိတ်ဆက်ခြင်း: ခြောက်လမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက် '' စားသုံးမှု။ Mass ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ 2005;8: 75-91 ။
Raudenbush S ကိုအရှိန် longitudinal ဒီဇိုင်းများအတွက်ဂျက်ကီချန်းဒဗလျူကြီးထွားကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ရာဇဝတ်မှုနှင့်သက်ငယ်ပြစ်မှုအတွက်သုတေသနဂျာနယ်။ 1992;29: 387-411 ။
Ringdal K ကို Ringdal, G, Kaasa S က, Bjordal K ကိုWisløffက F, Sundstrøm S က, Hjermstad အမ်ဟာ HRQoL ၏ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုတွေကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ် Mokken မော်ဒယ်အားဖွငျ့လူဦးရေဖြတ်ပြီး EORTC QLQ-C30 အတွင်း scales ။ ဘဝကသုတေသနအရည်အသွေး။ 1999;8: 25-43 ။ [PubMed]
ရောဘတ်: D, Foehr ဦး, Rideout V. မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက M: 8-18 တစ်နှစ်ကြားရှိ၏ဘဝအသက်တာ၌မီဒီယာ။ ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက; Menlo Park, CA: 2005 ။
အဆိုတော်ဂျေ, Willett ဂျေ longitudinal data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2003 ။
Slater အမ်လိမ်အားဖြည့်: မီဒီယာကို select နှင့်မီဒီယာသက်ရောက်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းအမူအကျင့်များနှင့်လူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဆက်သွယ်ရေးသီအိုရီ။ 2007;17: 281-303 ။
Somers ကို C, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ content ၏ Tynan ဂျေစားသုံးမှု: Multiethnic တွေ့ရှိချက်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်။ 2006;41: 15-38 ။ [PubMed]
Tolman D ကိုကင်မ်ဂျေ, Schooler: D, Sorsoli C. ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးအကြားအသင်းအဖွဲ့များ Rethinking: အာရုံသို့ကျားမဆောင်ခဲ့။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်။ 2007;40: 84.e9-84.e16 ။ [PubMed]
လမ်းညွှန်အဖြစ်တီဗီအသုံးပြုခြင်းရပ်ကွက် L ကို, Friedman K. : ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်။ 2006;16: 133-156 ။
ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနသုံးသပ်ချက်: အမေရိကန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်းရပ်ကွက် L. ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2003;23: 347-388 ။